आजदेखि निषेधाज्ञा झन् कडाः सबै पास रद्द, के छ नयाँ आदेशमा ? – Nepali in Australia
May 5, 2021 autherLeaveaComment on आजदेखि निषेधाज्ञा झन् कडाः सबै पास रद्द, के छ नयाँ आदेशमा ?
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा झन् कडा पारिने भएको छ । नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ सङ्क्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले निषेधाज्ञा झन् कडा पारिने भएको हो । यसपालिको निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन तह फितलो भएको गुनासो बढिरहेको छ ।
विवाह व्रतबन्धका हकमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्रै आवतजावत गर्न पाइने छ । नित्य पूजाबाहेक सबै धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यसअघि वैशाख १६ देखि बुधबार राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधको आदेश जारी गरिएको थियो । नयाँ आदेश भोलीदेखि लागू हुनेछ ।